Qubanaha » DEG DEG: Xaalad cakiran oo ka jirta stockholm iyo Askari La Dhaawacay
DEG DEG: Xaalad cakiran oo ka jirta stockholm iyo Askari La Dhaawacay
Feb 20, 2017 - jawaab
Booliska magaaladda Stockholm, ayaa xabaddaha digniinta cirka u tuuray, ka dib howlgal ay caawa ku doonayeen ineey ku soo qabtaan shaqsi ay doonayaan. Booliska ayaa halkaasi kala kulmay dhagaxeeyn xilli ay ku howlanaayeen qabashada shaqsigaasi oo ku dhuumaaleeysanayey barta tareenada xaafadda Rinkeby.
Wararka ayaa sheegaya in garabka laga dhaawacay askari ka mid ah askartii howlgalkaasi fulineeysay. Taasina waxaa ay qasabtay in xabadaha digniintaas ahi cirka u tuuraan. Dad goob joog ayaa telefeyshinka SVT u sheegay in xaaladu ay kacsaneeyd. Goobo ku yaala xaafadda Rinkeby ayaa lugu gubay toddobo gaari oo dhex yiilay baarkimadda xaafadda.
Ciidamadda dab damiska ayaan suuragal u noqon ineey galaan gudaha halka lugu gubay baabuurta, sababo la xirriira kooxo halkaasi ku dhagaxeeynaya booliska iyo kooxaha dab demiska. Saxafi madax banaan oo telefeyshinka u warmayey kuna sugan goobta ayaa sheegay in walaaca halkaasi ka jira ay u ekeyd goob dagaal.
“Waxaan u soo joogay goobo ay qalalaaso ka jiraan, tanina-se waxeey aheyd mid dheeri ah oo u ek goob dagaal” ayuu yiri saxafigan oo ka hadlayey xaalada jaha wareerka ah ee ka taagan xaafadda ajaanibtu ku badan yihiin ee Rinkeby. Ugu dambeyntiina askarta ayaa gacanta ku soo dhigay ruuxii ay doonayeen oo ay la dhaqaaqeen markii dambe.
Booliskana waxaa ay haatan bilaabeen baaritaan la xirriira xiisadda halkaas ka jira. Toddobaadkan hortaantiis ayaa dhalinyarro gaaraya soddomeeyo waxaa ay weerareen gawaari boolis ah oo xaafadda ilaalo gaar ah ka hayey waxaana halkaasi lugu dhaawacay saddex askari inkastoo dhaawacoodu yahay kuwo fudud.
Wixii Wara Ee Ku Soo Kordha Kala Soco Wararkeena Danbe
Abdi Mohamed John Sweden